'कोरोना रिटर्न' : लगाइसकेको खोपले काम गर्छ कि गर्दैन?
आयोमेल संवाददाता काठमाडौं - आइतबार, चैत ८, २०७७
भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्यसको त्रास बढेको छ।
भारतले त्यहाँ फैलिरहेको भाइरस नयाँ भेरिएन्ट हो या पुरानै हाे भन्ने बारे प्रस्ट रुपमा नखुलाए पनि त्यसको त्रास नेपालमा समेत बढेको छ।
युरोपका थुप्रै देशमा नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेको छ। भारतमा फैलिएको भेरिएन्ट पनि नयाँ हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
यहीबीचमा लगाइसकेको कोरोना खोपले नयाँ भाइरसलाई काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा पनि मानिसमा दुविधा उत्पन्न छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोला साउथ एसिएन भेरिएन्टलाई लगाइएको भ्याक्सिनले कम काम गर्ने कुरा बाहिरिएको बताउँछन्।
'यस विषयमा थप अध्ययन पनि भइरहेका छन्। खोप लगाइसकेको अवस्थामा सिकिस्त निमोनिया हुँदैन। तर, संक्रमित भएर अरुलाई सार्नसक्ने जोखिम त हुन्छ', उनले भने।
खोपले शरीरमा काम नगरेको अवस्था पनि हुने भएकाले खोप लगाइहाले भनेर स्वास्थ्य सावधानी नै नअपनाउनु गलत धारणा भएको उनले बताए।
'खोपले मेरो शरीरमा काम नगरेको भए म जोखिममा हुनसक्छु ठान्नुपर्छ। खोपले शतप्रतिसत काम गर्ने होइन। त्यसैले मापदन्ड, मापदन्ड, मापदन्ड भनिएको हो', उनले भने।
खोप सहज रूपमा पाउने अवस्था नभएकाले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु नै ठूला कुरा भएको उनी बताउँछन्।
उनी भेरिएन्टकोपछि नलागेर कोरोनासँग डराउन आग्रह गर्छन्। जुनसुकै भेरिएन्ट पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुनेभएकाले स्वास्थ्यसावधानी अपनाउन डा. बास्तोलाको आग्रह छ।
नेपालमै पनि नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको कुरा सञ्चारमाध्यममै आइसकेको अवस्थामा उच्च सावधानी अपनाउन उनी सुझाव दिन्छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ८, २०७७